HAWEENKA HANAD OO DEEQ GAARSIISAY BARAKAYAAL..
Deeq raashin ah ayaa maanta waxaa uu ururka Haweenka Nabada iyo Dib-u-heshiisinta Soomaaliyeed ee Gobolka Banaadir (HANAD) Gaarsiiyey Kaamka Barakacaasha ee 21 Octoober, Degmada waabari ee Gobolka Banaadir.
Deeqdan Rashinka oo ka koobneyd 5 Kiintaal oo Galay ah oo u dhiganta 10 loor, ayaa waxaa loo qeybiyey 250 qoys min 4 koombo oo galay ah, dadkan oo iyagu ka soo barakacay dhamaan Gobolda iyo degmooyinka Dalka Soomaaliya.
Guddomiyaha Ururuka Haweenka (HANAD) Ruqiyo Cali Cabdule oo halkaas ka hadashey ayaa saxaafada u sheegatay in deeqdaan rashinka ah ay iyaga uun iska soo uruuriyeen oo aysan ahayn mid uga timid dad kale ama deeq bixiyayaasha, iyadoo sheegtay sabababta ay u keeeneen inay tahay inay ku soomaan dadka ku jira kaamka 21 October.
dhanka kale Ruqiyo oo sii wadatay haalkeeda ayaa baaq waxa ay u jeedisay kooxa ku hardamaya Magaalda Muqdisho, waa Alshabaab iyo dowlade inay bisha ramadaan joojiyaan Dagaalka oo ay u naxaan Dadka Masaakinta ah ee soomaan si bay tiri dadka ay ugu soomaan si nabad gelyo ah.
sidoo kale Ruqiyo ayaa waxaa ay umada soomaliyeed dhamaantod ka codsatay inay iyagana sidoo kale soo gaarsiiyaan Deeq tan la mid si bay tiri dadka masaakinta ah ay ugu soomaan si farxad leh.
"Haween waayeel iyo caruur wixii meesha soo istaagay waa la siiyey intii kale hada ayaa la siin doonaa oo waa u yaalaa raashinkii ay keeeneen Ururka Haweenka HANAD." sidaas waxaa tiri mid ka mid haweenkii iyagu qaadanayey Deeqdaas raashinka ah.
Axmed Maxamed Dhaqane oo ah wiil dhallin yaro oo isagu ka muuqday dhaawac rasaas kana mid ahaa dadkii deeqdaas raashinka galeyda ha qadanayey ayaa sheegay inay xabada uga dhacdey feeraha uu hadana ladanayahay wuxuuna u mahad celiyey Ururuka Haweenka HANAD oo maanta soo gaarsiiyey Deeqdaan isagoo ugu baaqay dadka soo maaliyeed ee ku nool dalka Gudahiisa iyo dibadiisa inay iyaguna soo gaarsiin deeq tan la mid.
Waa markii ugu horeeysay ee uu ururkan HANAD soo gaarsiiyo deeq tan la mid ah Kaamka Barakacaayasha ee 21 OCtoober.